ဆင်းရဲခြင်း လွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဆောင်ပါမည်။ – H2Oupdatenews
ဆင်းရဲခြင်း လွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဆောင်ပါမည်။
oungmarine11@outlook.com 26/01/2021	No Comments
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အငြင်းပွားမှု့ အတွက် အဖြေပေးနိုင်တာ နည်းလမ်း တစ်ခုသာ ရှိပါတော့တယ်။
အဲ့ဒါက ဆန္ဒမဲပေးရက် အမှန်တကယ် မဲလာပေးသူ စာရင်းကို UEC က ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ပါ၊
အခုတော့ UEC က တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်ပဲ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဖြေချည့်နေတာတာ .. ဘာ အဓိပ္ပါယ်မှ မရှိပါ။ အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေး ထွက်ရရင် မကောင်းနိုင်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ သက်တမ်းက အရမ်းနုနယ်ပါသေးတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ပြည်သူ့ဆန္ဒအစစ်အမှန်ဖြစ်ဖို့ လုံး၀ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသား အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ အမှန်အကန် အနိုင်ရကြောင်း သက်သေပြပါ၊ စွပ်စွဲချက် မမှန်ကြောင်း ထင်ရှားသိချင်ပါ တယ်။
ကိုဗစ်နဲ့ ထောင်းလမောင်းကြေပြီးသား ပြည်သူလူထုမှာ ဘူးလေးရာ ဖရုံမဆင့်မိကြဖို့ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါ တယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်း .. အေးချမ်းစွာ အဖြေရှာလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ခုတော့ဗျာ .. ဆန်လေး.. ဆီလေး .. ပုန်းရည်ကြီးလေး ပြေးဝယ်ရတော့ မလိုပဲ….
အာ .. ဘယ့်နှယ် .. ပုန်းရည်ကြီးက ပါလာတာပါလိမ့်..
Previous Previous post: ပြည်သူလူထုဆိုတာ နှင့် ဒီမိုကရေစီ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး
Next Next post: ကော့ဇ်ဘဇား ဒုက္ခသည်စခန်း ၃၄-ခုအနက် ၁-ခုကို ပိတ်သိမ်းရန် ဘင်္ဂဘားဒေ့ရှ် အစိုးရ စီစဉ်။ စခန်းနေ လူ ၂,၀၀၀ ကို ဘာဆန်ချာကျွန်းသို့ ပို့ရန် ဟုတ်-မဟုတ် ဖြေကြားခြင်းမရှိ၊ စခန်းတစ်ခုလုံးကို သံဆူးကြိုးခတ်ရန်နှင့် ဒေသခံတို့နှင့် တင်းမာမှုကြီးထွားလာခြင်းကြောင့် ပိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ဟု ပြောဆိုနေ